मन परेको मान्छेलाई फकाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् है उपायहरू - Babal Khabar
चर्चित लेखिका Leil Lowndes ले यस बारे एक किताब लेखेकि छन्,”How to Make Anyone Fall in Love with You” जसमा तपाईले आफुले चाहेको व्यक्तिलाई कसरी आफु प्रती आकर्षित गर्ने भन्ने बारेमा केही टिप्सहरु दिईएका छन् ।
ति मध्ये केही टिप्सहरु यस प्रकार छन्;
१. उसलाई आफु तर्फ आकर्षित गर्ने पहिले तरिका हो, उसको आँखामा लगातार केही समयसम्म हेरीरहनु ।
यो केटा र केटी दुवैको लागी लाभदायक हुन्छ किनकी दुवै चाहान्छन् कि कोही आफुलाई राम्रो ठानेर हेरीरहोस र आफु प्रती उसको ध्यान आओस ।
यो पनि पढौ : दाँतको बीचमा खाली ठाउँ हुनेको भविष्य कस्तो ?
सामुन्द्रिक शास्त्र एउटा विस्तृत विधा हो। यसमा व्यक्तिको अनुहार, शरिरको अलग अलग अंगको आंकलन गरेर व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र अनि व्यक्तित्वको पत्ता लगाइन्छ। दाँतको बिचमा ग्याप – सुन्दरता: सामान्यतया दातँको बिचमा यदि ग्याप छ भने यसले मुस्कानलाई नै फिका बनाइदिन्छ। यसैलै सुन्दरताको दृष्टिले यो सहि मानिदैन।
सुख: सामुन्द्रिक शास्त्रको अनुसार जो व्यक्तिको दाँतको आकार समान हुनुको साथसाथ चमक पनि हुन्छ, उनीहरुले निकै सुखको जीवन व्यतीत गर्छन्।, रचनात्मक क्षमता: मिलेको दाँत भएका व्यक्तिको रचनात्मक क्षमता पनि गजबको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले पैसा पनि निलै सम्हालेर राख्न जानेका हुन्छन्।
बुद्धिमता: त्यस्तै अगाडीका दाँतको बिचमा खाली ठाउँ हुनुलाई सामुद्रिक शास्त्रले बुद्धिमताको निशानी मानेको छ।, ठुलो लक्ष: जो व्यक्तिको अगाडीको दाँतको बिचमा खाली ठाउँ हुन्छ ती व्यक्तिको भित्र निकै उर्जा हुन्छ अनि जीवनमा एक ठुलो लक्ष हासिल गर्नेछन्।
हार नमान्ने: दाँतको बिचमा ग्याप हुने व्यक्तिले सजिलै हार मान्दैनन्। खुसी रहन जान्ने हुन्छन् त्यसैले अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दा आत्तिने गर्दैनन्।, अति बोल्ने: सामुन्द्रिक शास्त्रको अनुसार यस्ता व्यक्ति निकै बोलक्कड हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति बिना कुनै बिषय बिहान देखि बेलुकी सम्म कुरै मात्र गरिरहन सक्छन्।
खुला बिचार: यस्ता व्यक्ति खुला विचारवाला पनि हुन्छन् अनि साथी पनि छिट्टै बनाउँछन्। ,खाना-पिनाको शौखिन: दाँतको बिचमा ग्याप हुने व्यक्तिहरु खाना-पिनाको निकै शौखिन हुन्छन्।
राजसी सुख: सामुन्द्रीक शास्त्रको अनुसार दाँतको बिचमा ग्याप हुने स्त्रीले राजसी सुख भोग्छिन्। पतिको प्रेम: जो स्त्रीको माथी र तल १६-१६ दाँत हुन्छन् ती स्त्रीले पतिको निकै प्रेम पाउँछन्। लामो दात: जो पुरुषको लामो दाँत हुन्छ, ती पुरुषला जीवनमा कहिल्यै धनको कमीको सामना गर्नु पर्दैन। यो खबर बुलबुल पोस्टमा छ । यस्तै अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ अर्ली टू बेड एण्ड अर्ली टू राइज, मेक्स अ म्यान हेल्दी, वेल्दी एण्ड वाइज ।
सुत्नुअघि आफैलाई प्रेरित गर्नुस् । बिहान चाडो उठ्नुछ भन्दै आफैले आफैलाई प्रेरित गर्नु्स् ।रातको समयमा प्रोटिनयुक्त तथा क्षमता भन्दा बढि खानेकुरा नखानुस् । धेरै खाना खाएमा निद्रा चाँडो आउँछ र बिहान ढिलासम्म सुत्ने हुन्छ । सुत्नुअघि चिया र कफि पिउने बानी साह्रै नराम्रो । यदि यस्तो बानी छ, भने सुत्नुअघि आजैदेखि बन्द गर्नुस् र बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुस् । बिहानको अर्लाम बजिसकेपछि स्नुज बटम नदबाउनुस् र अर्लाम बज्नेवित्तिकै उठ्ने बिनी बसाल्नुस् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prev“बिहान उठ्न अल्छी गर्ने साथीहरुले,एकचोटी अबश्य पढ्नुहोस”
nextवि’वाहपछि च’म्किन्छ यी राशी हुने व्यक्तिको भाग्य !